Dowladda Uganda oo ciidamado gaar ah u soo direysa Soomaaliya - Wargeyska Faafiye
Home 2014 October 29 .Warka Dowladda Uganda oo ciidamado gaar ah u soo direysa Soomaaliya
Ciidamada dowladda Uganda ay u soo dirayso Soomaaliya ayaa ah ciidamo si gar ah u tababaran, kuwaasi oo ay shaqadooda noqon doonto ilaalinta xarumaha muhiimka ah ee dowladda.
Sida ay qorayaan warbaahinta dalka Uganda ilaa iyo 2,700 oo askari oo si gaar ah u tababaran ayaa lagu wadaa in dhawaan dowladda Uganda ay u soo dirto Soomaaliya kuwaasi oo si gaar ah u ilaalin doonaana xarumaha dowladda sida Madaxtooyada, Baarlamanka, Wasaradaha, Dekedaha iyo garoomada diyaaradaha.
Taliyaha ciidamada dalka Uganda Jeneraal Katumba Wamala ayaa sheegey in ciidamadan cusub ay tababaro gaar ah ku soo qaateen dalalka Mareykanka iyo Faransiisika, taasi oo ka caawin karta ka hortagga falalka ay maleegayaan dhagar qabayaasha Shabaab.
Go’aanka ka soo baxay dowladda Uganda ee ay ku soo dirayaan ciidamadani ayaa ka dambeyeey markii ciidamada Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ay awoodooda militeri ku baahiyeen gobolada dalka kuwaasi oo dhawaan qabsaday magaalooyin muhiim ah sida magaalada Dekadda leh ee Baraawe, Cadale iyo goobo kale oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Jeneraal katumba Wamala ayaa kula dar daarmay ciidamadani in taxadir iyo feejignan dheeri ah si ay u fashiliyaan isdayga maleeshiyaadka ay ku doonayaan inay bartilmaameed ka dhigtaan goobaha shacabku u badanyahay.
Dowladda Uganda ayaa ciidamadan ay u soo direysa Soomaaliya ee qeybta ka ah AMISOM ayaa ah kuwii 17aad ee ay u soo diraan Soomaaliya tan iyo 2007-dii.
Heesaa Faransiis Caan ah oo ka Yaabisay shacabka France Kadib markey Xiratay XIJAAB .
Dad meyd waday oo shil ku dhacay
DAAWO VIDEO..Shariif Sakiin Si SIR ah looga soo duubay ..Shahaadada suqeey Taala .